July 27, 2020 1421
साउने संक्रान्ति पर्व शुरु भए’सँगै महिलाहरुमा मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने चलन साउनभरि परम्पराको रुपमा चलिआ’एको छ । प्राकृतिक रुपमा पनि हरि’यो महिना हो, साउन ।
वनजंगल, खेतवारी मात्र नभ’ई साउन महिना शुरु भएपछि युवतीका हातमा हरियो चुरा र मेहेन्दी देखिन्छ । विवा’हित महिला सौभाग्यको प्रतिकको रुपमा हरियो चुरा लगाउँछन् ।
अविवाहित युवती प’नि राम्रो वर प्राप्त होस् भन्ने भनी हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउँछन । तर, यो चलन कहिले बाट आयो र किन साउन मै हरियो चुरा र मेंहन्दी लगाइन्छ भन्नेबारे सबै’लाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
हिन्दू धर्मग्रन्थका अनुसार ‘ साउनमा माता पार्वतीले पति महादेवलाई खुसी बनाई सौभाग्य प्राप्त गर्न हरिया चुरा, पोते र हातमा मेहेन्दी लगाएकी थिइन् । र साउनमा जताततै हरिया’ली हुने हुनाले त्यही हरियालीमा रमाएर महादेवबाट सौभाग्य प्राप्तिको खुसी प्राप्त गर्न पाइन् । ’
प्राचीन किंवदन्ती अनुसार मेहेन्दी, हरियो चुरा र व्रत्र बस्दा विवाहित महिलाका श्रीमानको आयु बढ्छ । यसको वैज्ञा’निक तथ्य पनि रहेको छ ।
विवाहित महिलाले यसरी चुरा मेहेन्दी लगा’उँदा उनीहरुको सुन्दरता सामान्य भन्दा बढ्ने गर्छ जसले श्रीमानमा श्रीमतीको आकर्षण कायम राख्छ । श्रीमतीले व्रत्र बस्दा स्वास्थ राम्रो हुनुका साथै श्री’माती प्रति श्रीमानको सम्बन्ध प्रगाढ हुने गर्दछ ।
साथै चुरा लगाउँदा यसको ध्वनिले मानिस’को मस्तिष्कलाई एकाग्रता राख्न मद्दत गर्दछ । चुराको आवाजले मानिसको मस्तिष्कलाई अन्य धेरै नै फाइदा पुर्याउने वैज्ञानि’कहरुले पुस्टि पनि गरेका छन् ।
मेहेन्दीले पनि स्वास्थमा फाइदा पुर्याउँछ । मेहेन्दीको शीतलताले तनाव, टाउको दुखाई र ज्वरोबाट राहत प्रदान गर्ने मान्यता रहिआएको छ । नङलाई बढाउनका लागि पनि मेहेन्दी निकै प्रभाव’कारी मानिन्छ । तर, बजारमा पाइने रसायन युक्त मेहेन्दीले भने यस्ता फाइदा पुर्याउँदैनन् ।
साउनमा भगवान् शिवको पूजा, अभिषेक यसरी गर्नुहोस्…
हिन्दू धर्ममा साउन महिनामा भगवान शिव व्रत बसेर पूजा आराधना गर्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। धार्मिक पुराणका अनुसार अन्य दिनको तुलनामा साउन महिनामा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दा दुई गुणा लाभ मिल्ने गर्दछ।
भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउन यसरी गर्नुहोस् अभिषेक
दूधले अभिषेक !
यदी तपाईको घरमा हरेक समय कलहको वातावरण बनिरहन्छ भने तपाईले साउन महिनामा दूधले शिवलिं’गको अभिषेक गर्नुंहोस्। यसो गर्दा घर वा अफिसको कलह शान्त हुने गर्दछ। यसो गर्दा मुर्ख व्यक्ति पनि बुद्धिमान हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
जल चढाउनुहोस् !
शिवलिंगलाई जलले अभिषेक गर्दा विभिन्न मनो’कांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। हरेक दिन शिव लिंग’मा जल चढाउँदा मन शान्त हुनुका साथै भगवान चाडै प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ।
घ्यूले अभिषेक गर्नुहोस् !
यदी घरमा को’ही व्यक्ति प्रायः बिरामी हुने गर्दछ भने त’पाई भगवान शिवको लिंगमा शुद्ध घ्यूले अभिषेक गर्नुहोस् । यस्तो गर्दा रोग तथा स्वास्थ्य समस्या टाढा हुनु’का साथै वंश पनि विस्ता’र हुने विश्वास गरिन्छ।
महले अभिषेक !
यदी घरमा कुनै व्यक्ति गम्भि’र रोगबाट ग्रसि’त छ भने महले शिव लिंगको अभिषेक गर्नुहोस्। यसो गर्दा स्वास्थ्य’सम्बन्धी विभिन्न समस्या हटेर जानेछन्।
उखुको जुसले अभिषेक !
यदी तपाई जीवनमा निकै दु’खी हुनुहुन्छ भने उखुको जुसले शिवलिंगको अभिषेक गर्नुहो’स्। यसो गर्दा तपाईको घरमा खुशी फर्किनेछ।
गंगाजल चढाउनुहोस् !
मृत्युपछि मोक्ष प्राप्त गर्न चाह’नुहुन्छ भने गंगाजलले शिवलिंगको अभिषेक गर्नुहोस्। यसो गर्दा मोक्ष मिल्ने धा’र्मिक शास्त्रमा उल्लेख छ।
Prevआज साउने सोमबार, यसरी गर्नुहोस् भगवान् शिवको पूजा (मन्त्र सहित)
Nextआज विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्
घाँस काटि`रहेकी महिलालाई पछाडिबाट हवाइ`जहाज आएर ठक्क`र दिएर मारि|दियो
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132923)